Dhibaatooyinka isqabida iyo xiriirka lammaanaha - InfoFinland
Nolosha Finland > Xaaladaha dhibka > Dhibaatooyinka isqabida iyo xiriirka lammaanaha
Dhibaatooyinka xiriirka lammaanaha
Dhibaatooyinka xiriirka lamaanaha waxaa lagu falanqeyn karaa teraabiyada lammaanaha iyo qoyska. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah xiriirka oo adkaada, is-aamin la’aan iyo maseyr ama cabsi uu qof ka qabo in uu qofka kale waayo. Caawimaadda teraabiyada ee lamaanaha iyo qoyska waxaa bixiya la-talinta qoyska (perheneuvola) iyo dhexdhexaadiyaha arrimaha qoyska (perheasiain sovittelija), isbitaalada cudurada maskaxda, xarunta wadaxaajoodka arrimaha qoyska ee Kaniisadda (Kirkon perheasiain neuvottelukeskus) ee arrimaha qoyska iyo Ururka caafimaadka Maskaxda ee Finland (Suomen Mielenterveysseura). Haddii aadan kaniisadda xubin ka aheyn xitaa xarunta wadaxaajoodka Kaniisadda ee arrimaha qoyska waxaad afafka Iswidishka iyo Ingiriiska ku heli kartaa caawimaad lacag la’aan ah.
Macluumaadka dgaalka ama rabshadda ee qoyska iyo xiriirka lamaanaha waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Rabshad.
Caawinta dhibaatoyinka xiriirkaFinnish
Furriinka iyo mas’uuliyadda carruurta
Codsiga furriinka waxaad geysan kartaa maxkamadda degmadaada ama degmada lammaanahaaga. Furriinka kaligaa waad dalban kartaa ama wadajir ayaad adiga iyo lammaanahaagu u dalban kartaan. Furriinka waxaa la dalbadaa laba mar ama laba marxaladood ayuu maraa. Marka aad codsiga furriinka maxkamadda geeyso waxaa bilaabanaya sanad barkiis (käräjäoikeus) oo waqtiga-fiirsashada la yiraahdo. Marka waqtigaas uu dhamaado waa in lix bilood gudahood lagu codsadaa furriinka. Furriinku wuxuu sharciyan rasmi noqonayaa marki codsiga labaad la aqbalo kadib.
Haddii carruur ka yar 18 sano ay idinka dhexeeyso adiga iyo lammaanahaaga, xaaladda carruurta waxaa laga tashanayaa marka furiinka la dalbanayo. Waxaa laga heshiin karaa qofka carruurta mas’uul ka noqon doona, meesha ay carruurtu degeeyso iyo waqtiyada ay labada waalidba la kulmi karaan carruurta. Sidoo kale waxaa laga heshiin karaa caawimaadda nolosha, waa kaalmada dhaqaale ee labada waalid uu midkood bixiyo carruurta dartood. Arrimahaas waxaad ka heshiin kartaan lammaanahaaga ama waxaad u leexan kartaa xafiiska bulshada (sosiaalitoimisto) ee degmada.
Marka guurkaadi uu dhammaado waxaad u baahan kartaa caawimaad nafeed iyo mid sharci. Caawimaadda sharciga waxaad weydiisan kartaa xafiiska caawimaadda sharciga (oikeusaputoimisto). Caawimaadda nafsiga ah ee ku saabsan arrimaha furriinka waxaad ka heli kartaa meelo kala duduwan, tusaale ahaan kooxaha wax caawiya ee loogu talagalay dadka kala tegay ama is-furay. Arrimahaas waxaa qabanqaabiya kaniisadaha iyo ururada.
Faahfaahin dheeraad ah oo la xiriirta arrimaha mas’uuliyadda carruurta waxaad ka akhrisan kartaa bogga InfoFinlandi Furiin, Qoyska hal waalid keli leh iyo Waa maxey qoys?.